ခင်မင်းဇော်: ဘ၀ဒိုင်ယာရီ အမှတ် နှစ် အခန်း(၄)
Posted by ခင်မင်းဇော် at 11:21 PM
Curiouser & Curiouser! :-)
ပိုပိုပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားဘို့ ကောင်းလာပြီဗျိုး။
ကောင်းလိုက်တာ အမရေ။ ဆက်ရေးပါအုံး။
ရဲရဲ ရပ်ပြတဲ့ စိတ်တွေရှိကြဖို့ ထောက်ပြတဲ့
ဒီပို့ စ်ကလေးကို လေးစားစွာ အသိအမှတ်ပြု ပါတယ်။
အပိုင်း ၅ ဆက်ပါဦးအန်တီ
:) ကြိုက်တယ်။ ဆက်ရန် မြန်မြန်လေး လုပ်ပါ လို့ မတွန်းတော့ပါဘူး။ ငယ်ငယ်က သိုင်းဝတ္ထု ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို ဖတ်ရင်း ဇတ်လမ်းတွဲသစ် ထွက်မလာသေးလို့ မျှော်နေရတဲ့ ဖီလင်လိုပဲ။ အမလဲ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် ရေးမိတာ လူတွေ တစ်ပူဆာဆာ နဲ့ဝိုင်းပီး လုပ်ပါအုံး ဆက်ရေးပါအုံး အတွန်းခံရဖို့ ရေးမိသလိုပဲ :P.....
ဘ၀ဒိုင်ယာရီလေးကို နောင်တစ်ချိန်မှာ ခန့်ညားထည်ဝါ တဲ့ စာအုပ်ကြီးတစ်အုပ်ဖြစ်လာပါစေ..ကြိုးစားမှုတွေ အောင်မြင်တဲ့တနေ့ မြင်စမ်းချင်လှတယ်...။
တီရေ . ရှယ်ပဲဗျာ.. တီ့ကိုတော့ တကယ်လေးစားပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း မြန်မာထောင်ထဲ မရောက်ဘူးဘူးဗျ.. ရောက်ချင်လိုက်တာာ.. ဘယ်လိုလဲ ဆိုတာ ဘ၀မှာ သိသင့်တယ် ထင်တာပဲ.. တစ်ခုတစ်ခုလုပ်လိုက်ရင်တော့ ဟဲ ဟဲ ဝင်ရမှာတော့ ကြိမ်းသေတာပဲ. ဒါပေမဲ့ ဝင်ရမှာထက် .. အထဲက လူတွေကို တွေ့ချင်တာဗျ
ကိုယ့်အတွက်ကို မငဲ့ဘဲ အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်တတ်တဲ့ အမရဲ့ စိတ်ဓါတ်က အမစာရေးသမျှမှာ အမြဲ ပေါ်လွင်နေပါတယ်။ လူတိုင်း အားကျသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းအောင် ရေးတတ်လို့ တစ်နေ့ကျရင် စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်အဖြစ် မြင်ရမှာ သေချာပါတယ်။ ဆက်ရေးပါ အမရေ။ အမြဲ အားပေးနေတယ်နော်။
အာဂ သတ္တိရှင်ပဲ။ ရန်အောင် မောင်မောင် ရေးတဲ့ "ထောင့်တသက် အတွေ့အကြုံ" စာအုပ်ထက် ကောင်းသွားနိုင်တယ်။ ဆက်ရေးပါ။
great!!!I look up to you.